Amụma Nzuzo - YTpals
Amụma nzuzo a na-achịkwa ụzọ nke YTpals na-anakọta, na-eji, na-ekwusi ike ma na-ekpughe ozi sitere na ndị ọrụ (nke ọ bụla, “Onye ọrụ”) nke weebụsaịtị https://www.ytpals.com (“Site”). Amụma nzuzo a metụtara saịtị ma ngwaahịa na ọrụ niile YTpals nyere.
Anyị nwere ike ịnakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ site na ọtụtụ ụzọ, gụnyere, mana enweghị ya, na mgbe Ndị ọrụ bịara na saịtị anyị, debanye aha saịtị ahụ, tinye iwu, denye aha n'akwụkwọ akụkọ, dejupụta mpempe, yana n'ihe metụtara ihe omume, ọrụ, njirimara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anyị na-eme na saịtị anyị. Enwere ike ịrịọ ndị ọrụ maka, dị ka o kwesịrị, aha, adresị email, adreesị nzipu ozi. Anyị anaghị anakọta ozi kaadị akwụmụgwọ. Ndị ọrụ nwere ike, na -e nwere ike ịga na saịtị anyị na-amaghị ama. Anyị ga-anakọta ozi njirimara nke ndị ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ha ejiri aka ha nyefee anyị ozi dị otú ahụ. Ndị ọrụ nwere ike ịjụ ịnye ozi njirimara nke onwe ha, ewezuga na ọ nwere ike igbochi ha itinye aka na ọrụ ụfọdụ metụtara saịtị.
YTpals nwere ike ịnakọta ma jiri ozi nke ndị ọrụ maka nzube ndị a:
- Iji kwalite ọrụ ndị ahịa: Ozi ị nyere na-enyere anyị aka ịza arịrịọ ndị ọrụ ndị ahịa gị yana ịkwado ọrụ nke ọma.
- Iji melite saịtị anyị: Anyị nwere ike iji nzaghachi ị nyere iji meziwanye ngwaahịa na ọrụ anyị.
- Iji gbaa nkwalite, asọmpi, nyocha ma ọ bụ atụmatụ saịtị ndị ọzọ: Iji ziga ndị ọrụ ozi ha kwetara ịnata gbasara isiokwu anyị chere ga-amasị ha.
- Ka izipu ozi ịntanetị n’oge, anyị nwere ike iji adreesị ozi-e ziga ozi onye mmelite na mmelite metụtara iwu ha. O nwekwara ike iji ya zaa ajụjụ ha, ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na Onye ọrụ ga-ekpebi ịbanye na listi nzipu ozi anyị, ha ga-enweta ozi ịntanetị nke nwere ike ịgụnye akụkọ ụlọ ọrụ, mmelite, ngwaahịa metụtara ya ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg. Ọ bụrụ na oge ọ bụla Onye ọrụ ahụ ga-achọ iwepu aha na ịnweta ozi ịntanetị n'ọdịnihu, anyị gụnyere nkọwa zuru ezu. wepu aha ntuziaka na ala nke email obula.
Nnwere onwe na mgbanwe nke data dị n'etiti saịtị ahụ na ndị ọrụ ya na-enweta ọwa nkwukọrịta SSL echekwara ma kpuchie ya na akara ụbọchị dijitalụ.
YTpals nwere ikike imelite iwu nzuzo a n'oge ọ bụla. Mgbe anyị mere, anyị ga-agụgharị ụbọchị emelitere na ala nke ibe a. Anyị na-agba ndị ọrụ ume ka ha nyochaa peeji a ugboro ugboro maka mgbanwe ọ bụla iji nọrọ na-akọ banyere otu anyị si enyere aka ichedo ozi nkeonwe anyị na-anakọta. Kwenyere ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị ịtụle iwu nzuzo a kwa oge na ịmata mgbanwe.
Site na iji saịtị a, ị na-egosi gị nabata nke a iwu. Ọ bụrụ na ị na-ekweta na a iwu, biko ejikwala anyị na saịtị. Gị wee na ojiji nke saịtị na-eso ikenye nke mgbanwe a iwu ga-e weere gị nabata mgbanwe ndị ahụ.
Emelitere ihe odide a na Jenụwarị 22, 2019